Ogaden News Agency (ONA) – Khilaafkii Kooxda TPLF oo Soo Bandhigay Musuqii Ay Hantida Shacabka Kuhayeen.
Posted by ONA Admin	/ September 30, 2015
Warar lagu kalsoon yahay ooy heshay Wakaalada Wararka Ogadenya ee ONA ayaa sheegaya in khilaafkii u dhexeeyay madaxda kooxdii TPLF cirka isu shareeray. Warkan ayaa intaas kudsaraya in Madaxa Hay’ada Ladagaalanka Musuq Maasuqa Cali Sulayman uu shaaca kaqaaday ineey hayaan cadaymo badan oo muujinaya inuu kajiro musuq maamuq baahsan oo lagu soo eedeeyay Madaxda Wasaarada Gaashaandhiga Gumaysiga Itoobiya.
Cali Sulayman ayaa sheegay ineey 9 sargaal oo Wasaarada Gaashaandhiga Itoobiya kamid ah lunsadeen hanta aduun oo lagu qiyaasay 2.5 Million oo doolarka Maraykanka ah. Saraakiisha hantida lunsaday oo badankood Tigrey ah ayaa siyaabo kala gadisa umusuqay hantidan.
Warkan ayaa intaas raacinaya ineey arintan soo shaac baxday kadib markii uu cirka isku shareeray khilaafkii u dhexeeyay madaxda kooxda TPLF oo gaadhay meeshii ugu dambaysay. Waxaa kaloo uu sheegay Madaxa Hay’ada Ladagaalanka Musuq Maasuqa ineeysan arintani ku ekayn oo kaliya Wasaarada Gaashaandhiga balse ay tahay mid wadanka oo idil saamaysay taasoo ay sabab u yihiin door libaaxna ay ka qaateen saraakiisha Tigrey ee ku naaxay dhiiga shucuubta ay gumaystaan sida Shacabka Somalida Ogadenya.
Hay’ada Ladagaalanka Musuq Maasuqa ayaa ah Hay’ad iyadú magac u yaal ah, balse boodhka laga jafaa markii la rabo in koox laga takhaluso, waxaana halkaas ka cad in lagaga guulaystay loolankii xukunka kooxdan hadda lagu soo eedeyay musq maasuqa oo awl ahaan jiratay lama taabtaan.